Xulka Gobolka Banaadir oo ku guuleystay Koobkii Maamul Goboleedyada dalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xulka Gobolka Banaadir oo ku guuleystay Koobkii Maamul Goboleedyada dalka
Ardaan Yare 31 December 2020
Ciyaartoyda Xulka Kubada Cagta ee Gobolka Banaadir ayaa ku guuleestay koobkii kubada cagta ee loo dhigay dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, tartankan ayaana si xamaasad leh uga socday garoonka Eng Yariisow.
Ciyaarta fiinaalaha ee u dhaxeeyay labada kooxood ayaa kusoo dhamaatay bar bar dhac 2-gool iyo 2-gool, waxaana ciyaarta ugu dambeyn rigoorayaal 3-iyo 0 ku adkaaday xulka kubada cagta ee Gobolka Banaadir.
Garoonka kubada cagta ee Eng Yariisow ayaa waxaa buux dhaafiyay kumanaan taageerayaal ah oo kala taageersanaa xulalka Galmudug iyo Gobolka Banaadir, waxaana ciyaartan aheyd mid xiiso iyo xamaasad badan.
Xulka Kubada Cagta ee gobolka Banaadir ayaa 10-sano kadib maanta oo kale mar kale ku guuleesatay koobka loo dhigo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana ciyaartoyda Banaadir kahor ciyaarta loo sameeyay balan qaadyo badan.
Rag nafta u keenay shacabka oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo War Deg-deg ah kasoo saaray Guushii xulka G/Banaadir